Ịnkụbetọ:Ihụ Mbụ - Wikimedia Incubator
Ịbiaruola Wikimidiya Ịnkụbetọ!
Nka bụ Wikimidiya Ịnkụbetọ, ebe ike mmepụta arụmarụ Wikimidiya na asụsụ ọhụrụ di iche iche na Wikipediya, Wikibụkụs, Wikiniụsụ, Wikikwotụ, Wikshọnarị na Wikivọyeji nọ. Na eba ka a n'ahazi, depụta ma tụle ya tụpụ ndi Wikimidiya Faụndeshọnu ewepụtara ya ọha.
Ọ bụ ezie na ntụle arụmarụ wikis na Wikimidiya Ịnkụbetọ eweghi ike inọ nke onwa ya, mana onye ọbụla nyere ike igụ ya ma rụọ ọrụ na ya dika arụmarụ Wikimidiya ndi ọzọ.
Mbipụta asụsụ ọhụrụ na Wikivasiti ga aga na Beta Wikivasiti, na ndi nke Wikisọsụ ga aga na Multilingual Wikisọsụ.
Ị nweghi ike ịmalite arụmarụ ọhụrụ n'isi ebe a. Nanị ihe ị nwere ike ime bu ibido ntapịa arụmarụ dị bu adị ebe a na-asụsụ ọhụrụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmalite arụmarụ ọhụrụ, gaa na meta:aro arụmarụ ọhụrụ, kama ọ bụrụ iwepụta ntule ka-ịchọrọ, leeba Wịkịspọ anya.
Ebe a ka wịkị nile na-arụ ọrụ di.
Maka ihụ wịkị nile nọ na Wịkịmidya Inkụbetọ, ga na Inkụbetọ:Wịkịs
Otu esi amalite wịkị ntule ọhụrụ
Ọbụrụ na ịchọrọ ibido mbipụta arụmarụ asụsụ ọhụrụ, i ga enweta ntụziaka na Enyemaka:Ntụziaka Biko mara ebeụlọ Iwu.
Ụfọdụ iwu ndi di mkpa:
I kwesiri inwe ezigbo language code (okwu gbasara ya di ebe the manual) nọ. Ọ bụrụ na asụsụ nke gị enweghị nke onwe ya, i nwere ike irịọ anyị arịrịọ gbasara ị chọzị nke onwe gị ebe Incubator Plus nọ.
Ọ bụghị nanị ịkwado wiki ga-eme ka anyị kwenye ya. Ndi Language committee kwesiri bụrụ ụzọ ikwe na ọ bụ ezigbo ihe. Chọta ihe akwụrụ n'ebe Requests for new languages ka i mara ihe ọbụla gbasara isiokwu nke ahụ.
Biko, kwanyere usoro nke anyị na-eji enye asụsụ ọhụrụ aha nke ha, maka ọ ga-enyere anyị aka mgbe anyị chọrọ i buru edemede ndi ahụ itinye ha na ezigbo ọrụ aka nke wiki. Akwụkwọ intanet nile (nke ndi templet na katigoris sokwa n'ime ha) kwesiri inwe aha nke onwe ha. I ga-eji okwu nganihu inyekwa ha aha. I kwesiri me ka aha inyere akwụkwọ ndi ahụ ga-eyikwa onwe ha mgbe nile.
Otu esi enye aka ikwado wịkị ntule na Ịnkubetọ
Ọ bụrụ na ị ma asụsụ wiki ntule ya nọ ebe a, biko jisie ike tinye aka ịkwado wiki ntule ahụ.
Biko tinye nganihu kwesiri ekwesi n'ihuakwụkwọ nile ị deputara. Mụtakwuo banyere nganihu.
Arụmarụ ndi yiri nke a
Wịkịmịdịya Faụndeshọnụ nwere ọtụtụ arụmarụ ọrụ dị n'efu ndị ọzọ ha na-ekesa n'asụsụ dị iche-iche.
Nkà ihe ọmụma n'efu. Wịkshịọnarị
Ọkọwa okwu na tesaọrọs. Wịkịsọsụ
Ọba ọrụ dị n'efu. Wịkịkwotu
Ọba nsere okwu.
Retrieved from "https://incubator.wikimedia.org/w/index.php?title=Incubator:Main_Page/ig&oldid=5338248"